News: कुखुरापालक कृषक कसरी ठगिदै छन्? दाना कम्पनि, फेशहाउसले कसरी गुमराहमा राख्दै छन??
कुखुरापालक कृषक कसरी ठगिदै छन्? दाना कम्पनि, फेशहाउसले कसरी गुमराहमा राख्दै छन??
Various Source 2018-04-16 12083
बिभिन्न दाना कम्पनिहरुले दाबी गरे बमोजिम किन किसान हरु एफ्.सि.आर निकाल्न असफल छन ? के यो किसानको गल्ती हो कि कम्पनिहरुको हल्ला मात्र? हरेक कुखुरा पालक किसान ्हरुले जनिराख्नु पर्ने बिसय हो यो।
आदर्निय पाठक माहानुभावहरु, तल उल्लेखित बिषय अलि खरो भाषामा लेखिएको छ। मेरो यस लेखको एक मात्र उदेश्य सम्पूर्ण कुखुरा पालक किसान लाई सचेत गर्नु हो । यदी मेरो भनाइहरु प्रती असमती भए कृपया सभ्य भएर खरो भाषामै भएनी कमेन्ट गर्नु होला । यदी मेरो बिचार सँग सहमत हुनुहुन्छ भने अरु साथी भाईलाई नि पढ्न सल्ला दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
नेपालका अधिकाम्श किसान हरु निकै नै सोझा छन । यो पोल्ट्री क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा ब्रोइलर पालक किसान हरु लेयार्स पालक भन्दा बढी सोझा र ठगिमा पर्ने गरेको सुनिन्छ । सामन्यतय सि एफ आर (CFR) धेरै छ भनेर विज्ञापन गरेको दाना खुवाउदा कुखुरामा तौल आउनु पर्ने हो, लेयर्स कुखुराको अण्डा उत्पादन बढ्नु पर्ने हो तर किन आएन/ बढेन?
यो बिसयको वरिपरी रहेर निचोड निकाल्ने प्रयास गरेको छौ।
दाना कम्पनी तथा उस्को डिलर दाना बिकाउन किसानहरु लाई बिभिन्न प्रलोभन देखाउछ अझ भनौ भने यो दाना भित्र औषधी हालेको छ मोर्टालिटी कम हुन्छ विज्ञापनले भनेको आदी इत्यादी । होला कुनै कम्पनीको ट्रायल फर्म र उनिहरुले ट्रायल पनि गरे होला, र भने होला, तर यहाँ बातावरण नबुझी तेसै विज्ञापन बजाउने धेर छन । कुखुरा हुरकाउने २ खले बातावरण हुन्छ । नियन्त्रित अनि अनियन्तृत । ट्रायल फर्म भएको हरुले गर्ने ठाउँ लाई नियन्तृत भन्छ भने समान्य किसानको खोरमा गर्ने लाई अनियन्तृत भनिन्छ ।
यदी कुनै किसान ट्रायल फर्म हेरौ भनेर गए भने हुनेलेता निएन्तृत बातावरण भएको ट्रायल फर्म देखाउछन तर नहुनेले आफ्नो साथीभाइको फर्म एही हो भनेर देखाउछन । बिचार सोझो किसान, हो भन्यो पात्यायो आफ्नो खोरमा गएर भनेको सबै कुरा गर्‍यो तर हुँदैन ।
यती भए पछी किसान तनाबमा आउछ बिचारा मेरो भाग्य नै छैन, मलाई कुखुरा फापेन आदी आदी । हो, समस्या हामी किसानको तर्फ बाट मात्र उत्पन्न भएको होइन यो समस्या आउनमा दाना कम्पनी र उस्को डिलरको पनि उतिकै हात रहेको हुन्छ! को कता चुक्योउ तल उल्लेख गर्ने प्रायश गरेको छौ।
दाना कम्पनी : नियन्त्रित बातावरणमा कुखुरा हुर्काउछ, अनि तेही कुरा लाई आधार बनाएर झाल्री पिट्छ । तराइमा दाना कर्खाना सन्चालन गर्छ त्यहाँ ट्रायल गर्छ अनि तेही नतिजा पहाड र हिमालमा संचार माध्यममा बजाउछ। सोझा किसान न परे, टिभीले भनेको होला, र दुख गरेको पसिना बगएको पैसाले कुखुरा हाल्यो ४५ दिन भैसक्यो १६०० ग्राम भन्दा माथि आउदैन ।
एउटा उखान छ, तातो भात खाने सधै र्हिस्ट पुस्ट। हो एही कुरा लागु हुन्छ यहाँ । ताजा दाना नजिकैको ट्रायल फर्ममा खुवाएसी ३० दिन मा नै २ किलो आउन बेर छैन । सधै भन्दिन तर कैले कही भने दाना कम्पनीले दाना बिगर्ने गर्छ । कैले दाना कम्पनिले दाना बिगार्छ? एदी १ नं दाना बढी खपत भएको छ भने २ नं दाना बिगार्छ, कारण धेर दाना खपत हुन्छ ,आवासयक तत्तो नहाली बेच्ने गर्छ । यो कुरा साएदै कम मानिसलाई थाहा होला । यती मात्र होईन अरु बिभिन्न कारण छन जस्ले गर्दा दाना बिगृन्छ ।
दाना डिलर: पुरानो दाना राख्ने, बायो सिक्युरिटीको नियम निकै न्यून पलना गर्ने, कुखुरा र दाना ढुवानी एउटाै गाडीले गर्ने, किसानले गुनासो लग्यो भने दाना कम्पनी लाई दोश देखाउने आफु उम्किने!!
पहिलो चरणको दाना एउटा कम्पनिको दिने तेस्तै गरी अर्को चरणमा दोस्रो कम्पनी को दिने, अनि प्रतिबोरा मुल्य उध्योगको सबै भन्दा चर्कोको हल्ने। बिचार सोझा किसान डिपोजिट गरेर काम थालेका हुन्छन , जसो जसो गुरुजी उसो उसो स्व्हा भने जस्तै हो । जाम को बेला दाना बढी पेल्ने कुखुरा समयएमा नउठ्ने अनि Shortage मा १८०० ग्राममा नै खोर खोर ढुक्न पुग्ने ।
किसान: छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन अधुरो ज्ञान लिएर यो छेत्रमा प्रबेश गर्ने। प्रबिधिकको सल्लाह वेवास्ता गर्ने, दानाको बोरा तथा औषधीको बट्टा समेत राम्रो सँग नहेर्ने, कुन ब्रान्डको हो मिती कैले सकिने हो अदि इत्यादी वेवास्ता गर्ने, दाना डिलरले जे दिन्छ बेहोस भएर प्रयोग गर्ने, खोर ब्यब्स्थपन, खोर बनावोट उत्कृष्ट नहुने दाना तथा औषधी भन्डारण र आफ्नो खोर लाई नियन्तृत जस्तो बनाउन नसक्ने ।
यदी तपाईंकोमा कम तौलको समस्या छैन भने र यो पेसा बाट सन्तुट हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई बधाई छ । तपाईं सिक्षित १०% कुखुरा पालक सफल किसानहरुको समुहमा पर्नु हुन्छ । एदी कम तौलको समस्या छ भने पनि आतुर गरेर केहि हुने वाला छैन जबा सम्म सम्पूर्ण कुरा एक पछी अर्को गर्दै सुधार गरेर जानुहोला।
तपाईंको ब्यबसाय सफल होस मेरो शुभकामना!!